ကိုယ့်ဖုန်းကို အတွင်းအပြင် ဘယ်လိုသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးကြမလဲ? – DigitalTimes.com.mm
206 Shares 563 Views
စမတ်ဖုန်းတွေဝယ်တယ်ဆိုတာလည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်မျိုးပါပဲ။ ထိပ်တန်းဖုန်းတွေဆိုရင် desktop ကွန်ပျူတာတွေလောက်ကိုဈေးကြီးတဲ့အတွက် စည်းကမ်းရှိရှိနဲ့ကြာကြာသုံးတတ်ဖို့လိုတယ်လို့တော့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တော်တော်များများကိုစမတ်ဖုန်းနဲ့ကုန်လေ့ရှိကြတဲ့အတွက် အမြဲတမ်းသုံးနေရင်း app တွေ media တွေမလိုအပ်ပဲများများလာပါတယ်။ တတ်နိုင်သလောက်အချိန်ကြာကြာသုံးချင်တယ် အချိန်အကြာကြီးသုံးလည်း အသစ်အတိုင်းလေးလိုပဲဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် အတွင်းပိုင်းရော အပြင်ပိုင်းကိုပါ သန့်ရှင်းပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ဒါဆို ကိုယ့်ဖုန်းကိုဘယ်လိုသန့်ရှင်းကြမလဲ?
ဖုန်းကိုသေသေချာချာလေးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရင် အချိန်တွေအများကြီးသုံးပြီးတဲ့တိုင်အောင် ကိုယ့်ဖုန်းက အသစ်ကလေးလိုဖြစ်နေမှာပါ။ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေအတွက်ပဲ သီးသန့်ပိုးသတ်သန့်ရှင်းပေးတဲ့ သန့်ရှင်းရေးပစ္စည်းတွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ရေကျက်အေး ဒါမှမဟုတ် အရက်နဲ့ ဖုန်းကို အဝတ်စနူးနူးညံ့ညံ့လေးသုံးပြီးပွတ်ပေးပါ။ အရေးကြီးတဲ့တစ်ချက်သတိထားရမှာက ကြမ်းတမ်းတဲ့အဝတ်စကြီးတွေနဲ့မတိုက်ပါနဲ့၊ ခုနကသန့်ရှင်းဆေးရည်တွေ အရက်ပြန်တွေကို ဖုန်းပေါ်တိုက်ရိုက်လောင်းမချပါနဲ့။ အဝတ်စကိုစွတ်ပြီးမှ သန့်စင်ပေးပါ။
သေးငယ်တဲ့ကင်မရာမှန်ဘီလူးတွေအတွက်တော့ နားကြပ်တံလေးနဲ့ သန့်စင်တဲ့ရေကျက်အေးလေးနဲ့ မှန်ဘီလူးမှာကပ်နေတဲ့အညစ်အကြေးမှန်သမျှကို ညင်ညင်သာသာလေးသန့်ရှင်းပေးပါ။ နားကြပ်တံနဲ့ စပီကာတွေ၊ ရှိသမျှအပေါက်တွေကို သန့်ရှင်းပေးလို့ရပါတယ်။
ဒီထက်ပိုသန့်ရှင်းချင်ရင်တော့ PhoneSoap ကနေ $60 နဲ့ရောင်းပေးနေတဲ့ UV phone sanitizer ဆိုတာလေးနဲ့သန့်ရှင်းပေးလို့ရပါတယ်။
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ ဖုန်းထဲက application တွေက နှေးလာတာ၊ ဘက်ထရီအားကုန်တာမြန်လာတာ၊ စွမ်းဆောင်ရည်တွေကျလာတာ ဒါတွေကပုံမှန်ဖြစ်မှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးသက်သာအောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေရှိပါတယ်။
ပထမဆုံး ဖုန်းရဲ့ software version ကို နောက်ဆုံးဗားရှင်းကိုမြှင့်ထားပါ။ update အသစ်တွေက Operation System တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို ပိုချောမွေ့အောင်ဖန်တီးထားတာပါ။ update တွေမလုပ်ချင်လို့ လျစ်လျူရှုထားရင်တော့ အဓိကမြှင့်ပေးထားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေကို လက်လွတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဖုန်းရဲ့စနစ်ကိုသန့်ရှင်းပြီး ပိုမြန်ဖို့နောက်တစ်နည်းကတော့ ကိုယ်အသုံးနည်းတဲ့ ဒါမှမဟုတ် လုံးဝမသုံးတဲ့ app တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။ တချို့ဖုန်းတွေဆို carrier တွေက ဖုန်းရဲ့ system ထဲကို app တွေ build-in ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် ၂ခုထပ်နေတဲ့ “bloatware” တွေရှိနေပါတယ်။ ဒီ app တွေက မသုံးရင်တောင် လုံးဝဖျက်ပစ်လိုက်လို့လည်းမရတဲ့အတွက် disable ပဲလုပ်လို့ရမှာပါ။
နောက်တစ်ခုက ကိုယ့်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို SD ကဒ်ထဲမှာသိမ်းထားတာသေချာလားဆိုတာသွားစစ်ပါ။ SD ကဒ်ထည့်မထားဘူးဆိုရင်တော့ ထည့်ဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေကို SD ကဒ်ထဲကိုရွှေ့ပြီး မလိုအပ်တဲ့ပုံတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးဖုန်းက တော်တော်လေးဟန်းလာပြီဆိုရင် factory reset ချလိုက်ပါ။ reset မချခင်မှာတော့ ဒေတာတွေအကုန်လုံးကို BackUp လုပ်ထားပါ။
ကိုယ့်ဖုန်းကို အသစ်လဲလဲ မလဲလဲ ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းပြီးသန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ ကြာကြာလည်းခံ အမြင်လည်းလှ ကောင်းကောင်းလည်းစွမ်းဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရော သင့်ဖုန်းကို ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးဖြစ်ရဲ့လား? မလုပ်ရသေးရင် အခုပဲ အတွင်းရောအပြင်ပါ သန့်ရှင်းပေးလိုက်ပါ… 😉
စမတျဖုနျးတှဝေယျတယျဆိုတာလညျး ရငျးနှီးမွှုပျနှံမှုတဈမြိုးပါပဲ။ ထိပျတနျးဖုနျးတှဆေိုရငျ desktop ကှနျပြူတာတှလေောကျကိုဈေးကွီးတဲ့အတှကျ စညျးကမျးရှိရှိနဲ့ကွာကွာသုံးတတျဖို့လိုတယျလို့တော့ ထငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ပွောရရငျ ကိုယျ့ရဲ့အခြိနျတျောတျောမြားမြားကိုစမတျဖုနျးနဲ့ကုနျလရှေိ့ကွတဲ့အတှကျ အမွဲတမျးသုံးနရေငျး app တှေ media တှမေလိုအပျပဲမြားမြားလာပါတယျ။ တတျနိုငျသလောကျအခြိနျကွာကွာသုံးခငျြတယျ အခြိနျအကွာကွီးသုံးလညျး အသဈအတိုငျးလေးလိုပဲဖွဈခငျြတယျဆိုရငျ အတှငျးပိုငျးရော အပွငျပိုငျးကိုပါ သနျ့ရှငျးပေးဖို့လိုပါလိမျ့မယျ။ ဒါဆို ကိုယျ့ဖုနျးကိုဘယျလိုသနျ့ရှငျးကွမလဲ?
ဖုနျးကိုသသေခြောခြာလေးသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးရငျ အခြိနျတှအေမြားကွီးသုံးပွီးတဲ့တိုငျအောငျ ကိုယျ့ဖုနျးက အသဈကလေးလိုဖွဈနမှောပါ။ လြှပျစဈပစ်စညျးတှအေတှကျပဲ သီးသနျ့ပိုးသတျသနျ့ရှငျးပေးတဲ့ သနျ့ရှငျးရေးပစ်စညျးတှေ၊ ဒါမှမဟုတျ ရကေကျြအေး ဒါမှမဟုတျ အရကျနဲ့ ဖုနျးကို အဝတျစနူးနူးညံ့ညံ့လေးသုံးပွီးပှတျပေးပါ။ အရေးကွီးတဲ့တဈခကျြသတိထားရမှာက ကွမျးတမျးတဲ့အဝတျစကွီးတှနေဲ့မတိုကျပါနဲ့၊ ခုနကသနျ့ရှငျးဆေးရညျတှေ အရကျပွနျတှကေို ဖုနျးပျေါတိုကျရိုကျလောငျးမခပြါနဲ့။ အဝတျစကိုစှတျပွီးမှ သနျ့စငျပေးပါ။
သေးငယျတဲ့ကငျမရာမှနျဘီလူးတှအေတှကျတော့ နားကွပျတံလေးနဲ့ သနျ့စငျတဲ့ရကေကျြအေးလေးနဲ့ မှနျဘီလူးမှာကပျနတေဲ့အညဈအကွေးမှနျသမြှကို ညငျညငျသာသာလေးသနျ့ရှငျးပေးပါ။ နားကွပျတံနဲ့ စပီကာတှေ၊ ရှိသမြှအပေါကျတှကေို သနျ့ရှငျးပေးလို့ရပါတယျ။
ဒီထကျပိုသနျ့ရှငျးခငျြရငျတော့ PhoneSoap ကနေ $60 နဲ့ရောငျးပေးနတေဲ့ UV phone sanitizer ဆိုတာလေးနဲ့သနျ့ရှငျးပေးလို့ရပါတယျ။
အခြိနျကွာလာတာနဲ့အမြှ ဖုနျးထဲက application တှကေ နှေးလာတာ၊ ဘကျထရီအားကုနျတာမွနျလာတာ၊ စှမျးဆောငျရညျတှကေလြာတာ ဒါတှကေပုံမှနျဖွဈမှာပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဒါမြိုးသကျသာအောငျလုပျလို့ရတဲ့နညျးလမျးလေးတှရှေိပါတယျ။
ပထမဆုံး ဖုနျးရဲ့ software version ကို နောကျဆုံးဗားရှငျးကိုမွှငျ့ထားပါ။ update အသဈတှကေ Operation System တှရေဲ့စှမျးဆောငျရညျတှကေို ပိုခြောမှအေ့ောငျဖနျတီးထားတာပါ။ update တှမေလုပျခငျြလို့ လဈြလြူရှုထားရငျတော့ အဓိကမွှငျ့ပေးထားတဲ့စှမျးဆောငျရညျတှကေို လကျလှတျသှားပါလိမျ့မယျ။
ဖုနျးရဲ့စနဈကိုသနျ့ရှငျးပွီး ပိုမွနျဖို့နောကျတဈနညျးကတော့ ကိုယျအသုံးနညျးတဲ့ ဒါမှမဟုတျ လုံးဝမသုံးတဲ့ app တှကေိုဖကျြပဈပါ။ တခြို့ဖုနျးတှဆေို carrier တှကေ ဖုနျးရဲ့ system ထဲကို app တှေ build-in ထညျ့သှငျးထားတဲ့အတှကျ ၂ခုထပျနတေဲ့ “bloatware” တှရှေိနပေါတယျ။ ဒီ app တှကေ မသုံးရငျတောငျ လုံးဝဖကျြပဈလိုကျလို့လညျးမရတဲ့အတှကျ disable ပဲလုပျလို့ရမှာပါ။
နောကျတဈခုက ကိုယျ့ပုံတှေ ဗီဒီယိုတှကေို SD ကဒျထဲမှာသိမျးထားတာသခြောလားဆိုတာသှားစဈပါ။ SD ကဒျထညျ့မထားဘူးဆိုရငျတော့ ထညျ့ဖို့အကွံပေးခငျြပါတယျ။ ပုံတှေ ဗီဒီယိုတှကေို SD ကဒျထဲကိုရှပွေီ့း မလိုအပျတဲ့ပုံတှကေိုဖကျြပဈလိုကျပါ။
နောကျဆုံးဖုနျးက တျောတျောလေးဟနျးလာပွီဆိုရငျ factory reset ခလြိုကျပါ။ reset မခခြငျမှာတော့ ဒတောတှအေကုနျလုံးကို BackUp လုပျထားပါ။
ကိုယျ့ဖုနျးကို အသဈလဲလဲ မလဲလဲ ပုံမှနျထိနျးသိမျးပွီးသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးရပါမယျ။ ဒါဆိုရငျတော့ ကွာကွာလညျးခံ အမွငျလညျးလှ ကောငျးကောငျးလညျးစှမျးဆောငျနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။ သငျရော သငျ့ဖုနျးကို ပုံမှနျသနျ့ရှငျးရေးလုပျပေးဖွဈရဲ့လား? မလုပျရသေးရငျ အခုပဲ အတှငျးရောအပွငျပါ သနျ့ရှငျးပေးလိုကျပါ… 😉
Xiaomi Mi Mix 2s မှာ ကြိုးမဲ့အားသွင်း စနစ် ပါမှာ သေချာပြီ